Omuma okwu ndi di na Forex Trading | FXCC Blog
Omuma akparamagwa na Forex Trading
Feb 27 • N'etiti ahịrị • 6535 Echiche • Comments Off na The psychology gụnyere na Forex Trading
3 Ms nke ahia bụ ihe a na-emekarị mgbe a na-ekwu banyere ahia; uche, usoro na njikwa ego aghọwo okwu a nakweere nke anyị na-akọwa ihe gbasara ịzụ ahịa. A na-akọwakarị usoro dịka atụmatụ aghụghọ nke anyị mepụtara; ego abụọ anyị na-ere, oge oge, ihe nyocha na-akwado mkpebi anyị wdg.
Nchịkọta ego na-eche banyere ihe ize ndụ anyị chere na ọ bụla ahịa anyị na-ewe ma eleghị anya ọkwa zuru oke na ihe ize ndụ anyị kwadebere ịnakwere dịka akụkụ nke atụmatụ azụmahịa anyị.
Uche, a na-ekwukarị na ọ bụ dịka ụbụrụ nke 3. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-edepụta ngwá ahịa ga-arụ ụka na echiche anyị kwesịrị ịkwado elu karịa usoro na njikwa ego. Mkparịta ụka ahụ bụ na ruo mgbe anyị nwere ike ịchịkwa nsogbu dị iche iche dị iche iche nke nwere ike imerụ ike ahịa anyị, mgbe ahụ, ndị ọzọ bụ 2 Ms abaghị uru. Lee ka eziokwu a si bụrụ eziokwu, bụrụ ihe ndabere nke nkwurịta okwu a.
Kedu ka anyị si ezo aka n'akparamàgwà, mgbe anyị na-etinye okwu na echiche maka ịzụ ahịa? Ikekwe ihe kachasị mkpa bụ nnọọ nsụgharị nke ahịrịokwu anyị na-anụkarị; "Na-eche echiche anyị n'ebe kwesịrị ekwesị". Anyị na-eji ụdị okwu a n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ anyị ma enwere oge mgbe edozi uche anyị dị mkpa.
Ịhazi ihe niile anyị chere, iji hụ na anyị nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka ịzụ ahịa ego site na ụlọ ma ọ bụ obere ụlọ ọrụ, nwere ike ịnọchite anya nsogbu yiri nke ahụ maka ikwu okwu n'ihu ọha. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị agụnye otu ọsụsọ na-emetụta nchekasị, nrụgide anyị na-enweta mgbe ahia, nke a na-emekarị ka ọ dị elu mgbe anyị bụ ndị ahịa ahịa, nwere ike na-enwekarị mmetụta dị njọ. Ma enwere ọtụtụ ihe dị mfe anyị nwere ike ịmụta, dịka akụkụ nke usoro atụmatụ ahịa anyị niile, nke nwere ike inyere anyị aka idozi uche anyị, tupu oge azụmahịa anyị na ụbọchị ahịa anyị amalite.
N'okwu a dị mkpirikpi, anyị agaghị enwe ike ikpuchi omume nile nke nwere ike idozi echiche ịzụ ahịa gị, ya mere, anyị ga-etinye uche na otu akụkụ dị mkpa nke ga-enyere aka hụ na ị nwere ike ịmepụta nwayọọ na njikere maka nsogbu ịzụ ahịa; nkwadebe na oge.
"Ịghara ịkwadebe na ịkwadebe iji daa", bụ ahịrịokwu anyị na-ejikarị eme ihe n'ịzụ ahịa na nkwadebe bụ echiche dị njọ. Inwe ndepụta ndetu na iji nwayọọ na iji aka mee ka ndepụta a kwadoro nwere ike ime ka anyị nọrọzie, mee ka anyị dị jụụ, legide anyị anya ma kpebie anyị ka anyị hụ na anyị nọ n'ọnọdụ kachasị mma maka ahia.
Jide n'aka na ị maara ihe ndị dị mkpa na kalenda akụ na ụba bụ ndị a ga-ebipụta n'ụbọchị ahụ. Gbaa mbọ hụ na ị maara nke ọ bụla na-agbasa ozi ọma, ma ọ bụ ozi ọma nke mebiri n'abalị. Lelee maka mmegharị ego ọ bụla a na-ahụkarị na nke mbụ. Ụdị ego abụọ 28 na ọtụtụ ndị ahịa ga-atụle ahịa, n'ụzọ dị otú ahụ ị nwere ike ịchọpụta ụfọdụ mmekọrịta na-emepe emepe. Lelee njikwa akaụntụ gị, lelee ọnọdụ gị, lelee ndepụta mgbasa ozi gị. Gini mere ọbụnadị ịlele ọrụ ịntanetị gị maka ibudata na ọsọ ọsọ? E nwere ihe nlele ndị ọzọ anyị nwere ike ikwu, mana ị ga-enweta echiche zuru ezu. N'ụzọ dị otú a, anyị na-amalite ilekwasị anya na ihe ịma aka n'ihu.
Ikekwe dị ka anyị na-eme oge nyocha anyị na-etinye aka n'ụdị usoro mgbasa ozi; anyị nwere ike ịmalite iji ụma chọpụta nke ọma anyị. Kedu ka anyị si eche, olee otú iku ume anyị si dị, olee otú anyị si enwe nchekwube ahịa ugbu a, olee ihe bụ ebumnuche anyị maka taa, n'izu a, n'afọ a, gịnị bụ ihe mgbaru ọsọ anyị?
Ebumnuche anyị n'isiokwu a bụ ịdọrọ uche gị gaa n'ihe gbasara nkà mmụta uche na-echere ahịa. N'iji na e nwere ọtụtụ akwụkwọ edemede akwadoro nke ndị ahịa na-akwanyere ùgwù na isiokwu ahụ, anyị nwere ike ịnweta elu na gburugburu 800 okwu. Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị, nke bara uru ịgagharị n'oge oge azụmahịa gị.
" Ịkpọ oku na-agagharị A Candlestick refresher Agụmakwụkwọ, na-achọ ọrụ ego »